Chi enwe enwego ekwuola na Scott Adams dere akwụkwọ! | Martech Zone
Chi enwe na ekwu na Scott Adams na ede akwukwo!
Onye na-ese foto Scott Adams ka wepụtara akwụkwọ edemede site na blọọgụ ya, Nọgide na ịse ihe osise, ụbụrụ ụbụrụ!: Cartoonist leghaara ndụmọdụ na-enye aka anya. M na a na-agụ Scott si blog maka nnọọ a mgbe na ọ bụ, nnọọ, na blog kachasị ọchị Agụla m.
Nke a bụ snippet si Scott ọhụụ kacha ọhụrụ na mwakpo Enwe India:
Dabere na BBC, ndị okpukperechi Hindu na-eche na enwe bụ ngosipụta nke chi enwe enwe bụ Hanuman. Kwe ka m tinye aka ebe a kwuputa na m nwere ike pịnye mkpụrụ okwu ndị a bụ “chi enwe” ogologo ụbọchị dum, na ime nke a ga-eme m obi anụrị oge ọbụla. Maka ezigbo ebumnuche, ngwakọta okwu a bụ “enwe enwe” na-ewepụta ntakịrị ntakịrị ntakịrị nke ọgwụ serotonin n’ime akụkụ ụbụrụ m nke kacha nwee mmasị na ya.
Chi enwe, chi enwe… chi enwe… Aaaaah, nke a bụ ihe m na - ekwu? banyere.
Maka onye ọ bụla nọrọ ndụ na cubicle nke ụlọ ọrụ America, obi abụọ adịghị ya na ị hụla ma ọ dịkarịa ala otu warara Dilbert na-eme ya na ọfịs. Egwuregwu Scott Adams dị ka onye edemede na-atọ ọchị maka ya, n'agbanyeghị. Echere m na nke a bụ ihe akaebe na nkà na ihe ịga nke ọma abụghị egwuregwu nke ohere. Fọdụ n'ime ihe kacha amasị m bụ mgbe ọ na-ekenye asụsụ ma ọ bụ katuunu nke na-emeghị site na nyocha nke usoro ntinye.
Nke kacha mma maka Scott na akwụkwọ ya. Kedu ihe nke a na Teknụzụ Azụmaahịa metụtara? Echere m na ọ bụ akụkọ na-akpali akpali na ndị folks nwere ike gbanwee blog n'ime akwụkwọ. Seth Godin ji ya mee ya Obere Bụ Big ọhụrụ: na 183 Riffs ndị ọzọ, ụgbọ mmiri, na echiche azụmahịa dị ịrịba ama, Chris Baggott mere ya na Ahịa Email Site Ọnụ Ọgụgụ: Otu esi eji Ngwá Ọrụ Kasị Elu Worldwa Were Anytù ọ bụla gaa n'ọkwa ọzọ ugbu a Scott na-eji akwụkwọ ya eme ya.
Maka azụmahịa, ịdepụta akwụkwọ na-eweta ntakịrị ntụkwasị obi. Blogde blọgụ ahụ nwere ike iduga n'ịde akwụkwọ nwere ike ịbụ ihe azụmahịa niile kwesịrị iche! Ama m na m!
Ikwu okwu nke akwukwo, M binged na Amazon taa ma zuta a ole na ole onwe m! Di na nwunye di na nwunye na akwukwo ahia nke akwukwo nke di na uzo ha.
Tags: Onwukaakwụkwọ ahịaenwe enwescott adamsseth godin